Hay'addo iyo Shirkaddo u gurmaday dan-yartii laga raafay Sool | KEYDMEDIA ONLINE
Hay’addo iyo Shirkaddo u gurmaday dan-yartii laga raafay Sool
Kumanan muwaadiniin Soomaali ah, oo ku noolaa, kuna shaqeynsanayay Laascaanood ayaa si qasab ah looga soo saarey todobaadkii hore, waxayna u baahan yihiin gargaar bani’aadannimo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hay’adda Hormuud Salaam Foundation o ah garabka u qaabilsan shirkadda Iskaarsiinta Hormuud Telcom iyo Bankiga Salaal, howlaha hormarinta iyo gargaarka bulshada, ayaa lacag gaareysa $200,000 (labo boqol oo kun oo dollar) ugu deeqday dadkii dan-yarta ahaa ee laga soo masaafuriyay degmada Laascaanood todobaadkii hore.
Gudoomiyaha hay’adda, Cabdullaahi Nuur Cusmaan, oo warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay, in u jeedkoodu uu yahay in ay qeyb ka qaataan, dadaallada bini’aadannimo ee loogu gurmanayo shacabka laga raafay gobolka Sool, kuwaas oo qeybtii ugu horreysay ay dhawaan gaaareen magaalada Baydhabo.
“Lacagtaan maanta ayaan ku dhawaaqnay, maalmaha soo socda ayaan gaarsiin donna dadka laga soo barakiciyay magaalada laascaanood, in badan oo ka mid ah dadkaas waxa ay gaareen Baydhabo, qaar kalana waa ku sii socdaan, waxaana lacagtaas gaarsiin donna sida ugu dhaqsiyaha badan, waxaana u siin donna si Cash, (Caddaan) ah”. Ayuu yiri, Cabdullaahi Nuur.
Hormuud Salaam Foundation, waa mid ka mid ah shirkadaha, aan macaash doonka ahayn, waxaana maalgelisa Hormuud Telecom Iyo Salaam Bank Somali, waxayna xilliyo kala duwan ka qeyb qaadatay tabarucaadda dad gargaar bani’aadannimo u baahnaa.
Guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, ayaa si weyn kaga xumaatay qaabka ay Soomaaliland, ula dhaqantay dadka ka soo jeeda Koofurta Soomaaliya, kaliyana Hay’adda Hormuud Salaam Foundation, kuma koobna sadaqeystayaasha, oo dad badan oo siyaasiyiin iyo shacabba leh, ayaa horraanba ku deeqay lacag kumanaan dollar ah.
Soomaalilan, waxa ay ku doodday, in go'aanka musaafurinta, dadka ka soo jeeda Koofurta Soomaaliya, ay ku timid arrimo la xiriira amniga, oo ay ku jiraan codsiyo ka yimid bulshooyinka degaanka, sida ay ku sheegeen, war ka soo baxay shanti bishaan.